Maxay tahay sababta uu Paul Pogba u qaatay Diinta Islaamka? | Berberanews.com
Home CAYAARO Maxay tahay sababta uu Paul Pogba u qaatay Diinta Islaamka?
Laacibkan u dhashay Faransiiska, Paul Pogba, ayaa beeniyay warar dhowaans oo baxay oo sheegayay in uu “ka baxay xulka qaranka dalkaas” ka dib hadalladdii laga cadhooday ee madaxweynaha Faransiiska.
Laacibka qadka dhexe uga dheela kooxda Manchester United, Paul Pogba, ayaa sidoo kale sheegay in uu dacwad maxkamadeed la tiigsan doono warbaahinta faafisay wararkaas “been abuurka ah”.
Qaar ka mid ah wargeysyada Britain ayaa qoray warar ay ku sheegeen in “Bariga Dhexe” ay ka soo xigteen oo sheegaya in Pogba uu doonayo in uu xulka qaranka Faransiiska ka tago, ka dib markii madaxweynaha dalkaas uu sheegay in uu ka hortagayo Islaamka xagjirka ah taa oo ka dhalatay weerarkii lagu dilay macallimkii ardeydiisa tusay sawir lagu sheegay Nabi Maxamed NNKH.
Laacibkan u ciyaara Manchester United oo Muslim noqday, wuxuu bartiisa Instagram ku qoray, “Wararka beenta ah lama aqbali karo.”
Siduu Diinta Islaamka ku qaatay Pogba?
Pogba ayaa xusay ‘in markii hore uu su’aalo iska weydiiyay waxyaabaha ku khasbay inuu islaam noqdo balse markii uu diinta qaatay uu qalbigiisa xasilay’
Paul Pogba waxaa uu yiri “Diinta islaamka waxay iga dhigtay qof sidii hore ka wanaagsan”.Bishii lasoo dhaafay, waxaa baraha bulshada lasoo galiyay Paul Pogba oo la sawiran difaaca kooxda Chelsea Kurt Zouma, xilli ay acmaashooda cumrada ku gudanayeen magaalada barakeysan ee Maka.
“Waxay diinta islaamka ii horseedday isbaddal, qalbiga ayay ii dejisay, nolosheyda waxaa ku yimid isbaddal, horay ma aanan u aheyn qof muslim ah inkastoo ay hooyadeey aheyd muslim, sidaas ayaan kusoo barbaaray, waxaan qaddariyaa qof kasta” ayuu yiri Pogba.
Markii la weydiyay sababta u horseedday in uu muslim noqdo waxaa uu yiri “waxaan leeyahay saaxibbo badan oo islaam ah oo aan had iyo jeer sheekeysanno”.
“Islaamka maskaxda ayuu ii furay, qof ka wanaagsan sidii hore ayuu iga dhigay… Islaamka waxa uu na farayaa qaddarinta aadanaha” ayuu yiri Pogba.
Waxa uu ka ciyaaraa khadka dhexe, waana laacib ay si weyn ay ugu faanaan taageerayaasha kooxda.Xigasho Bbc Somali
Previous article“Haddii Aynu Nahay Muslim Waa Inaynu Nabigeena U Hiilina, Oo Aynu Difaacnaa” A Yusuf Yasin
Next articleKenya: Maxkamad xukuntay rag ku eedaysnaa weerarkii Westgate